वृद्ध संस्कृति र बलवान् पुरुषबाट नेपाली महिलाहरुको खुलमखुल्ला हत्या कहिलेसम्म ? | Sambad Media
वृद्ध संस्कृति र बलवान् पुरुषबाट नेपाली महिलाहरुको खुलमखुल्ला हत्या कहिलेसम्म ?
प्रायः पुरुष पत्रकारहरुले महिलाहरुको हक, अधिकार र पीडाहरुको बारेमा कलम चलाउन कन्जुस्याइ गर्छन भनेर यहाँ उल्लेख गरियो भने पंक्तिकारमाथि आरोप लाग्न सक्छ तर वास्तविकतालार्इ तितो नमान्ने हो भने यथार्थ हाम्रै वरिपरी छ । यसो भनिरहँदा एउटा पत्रकारले अन्य पत्रकारहरुलार्इ नलेखेकै आधारमा आरोप लगाएको भने पक्कै हैन । तमाम नेपाली महिलाहरुको असन्तुष्टिको आवाजलार्इ यहाँ समर्थन गर्न खोजिएको मात्र हो ।
विषयवस्तुमाथि प्रवेश गरिहालौ
एकातिर नेपाली महिलाहरु यौनहिंसा, बलात्कार जस्ता यौनजन्य क्रियाकलापको शिकार बनिरहेका छन भने अर्कोतिर साँस्कृतिक दरिद्रता, असमाजिकता, अन्धविस्वासले समेत महिलामाथि नै निरन्तर प्रहार भैरहेको विषयलार्इ यहा उल्लेख गरिरहन नपर्ला ।
सुन्दै, देख्दै र भोग्दै आएका महिलासँग सम्बन्धित घटनाहरुले मात्र प्रायः किन नेपालको कानुन र कार्यान्वण पक्षमाथि चुनौति र प्रश्न चिन्ह खडा गरिरहेको छ आम जनमानसको चासोको विषय बनिरहँदा प्रश्नको उत्तर न्यायिक ठेकेदारहरुको गोजिमा होला तर नेपाली चेलीहरु स्वदेशदेखि परदेशसम्म कहिलेसम्म हत्या र आत्महत्याको शिकार बनिरहने ? जस्तो गम्भीर प्रश्नले परदेशमा आत्महत्या गर्ने अष्टमीहरुका आमाबुबाहरुलाइ दिनहुँ पिरोलिरहेको छ ।
स्वदेशदेखि विदेशसम्म दिनहुँ नेपाली महिलामाथि भएका हत्या, आत्महत्या, बलात्कार, महिला हिंसाजन्य समाचारहरु हरेक मिडियाहरुको ब्यानर हेडलाइन बन्दा पनि सम्बन्धित निकायको मौनता, अपराधी लाई उन्मुक्तिजस्ता निच हर्कतले परदेशमा समेत अष्टमी गुरुङ्गहरुले ज्यान गुमाइरहेका छन ।
अष्टमीको आत्महत्यापछिको बास्तविकताले अझ समाजसेवाको नाममा च्याउसरी उत्पादन गरिएका सामाजिक संस्था तथा राजदुतावासको भुमिका र जिम्मेवारीले समेत युएर्इमा रहेका नेपाली मजदुरहरुलार्इ सशंकित बनाएको छ ।
त्यसो त अष्टमीको मृत्यु मात्र हैन स्वदेशमा समेत महिलासँग सम्बन्धित हजारौ घटनाहरु उधारो नै छन । कतै न कतै सामाजिक, सांस्कृतिक, परम्परागत अन्धविस्वासले समेत महिलाहरु विविध प्रकारका शोषण र हत्याको शिकार भएकै नै छन ।
केही समय अगाडी रुपन्देहीको मर्चबारबाट सार्वजनिक भएको एएटा भिडियो फुटेज निक्कै भाइरल भयो । रुपन्देही मर्चबारकै स्थानिय युवती मिना यादवले गाउँकै एक किशोरसँग प्रेम गरेको खुलासा भएपछि परिवार र समाजले बिच सडकमा निर्घात कुटपिट गरेको थियो । उनका बुबासहितले लाती र मुडका प्रहार गरेको उक्त भिडियो सार्वजनिक भएपछि पीडितका बाबुलार्इ प्रहरीले पक्राउ समेत गर्‍यो भने अन्यलाई खोजी भैरहेको अहिले पनि बताइरहेको छ ।
त्यसैगरी भोजपुरकी ११ बर्षिया बालिकालार्इ घरमा एक्लै बसिरहेका बेला छिमेकी २० बर्षिय दुर्गबहादुर श्रेष्ठले जबर्जस्ती करणी गरी गर्भवती बनाएको घट्नाले समेत सबैलार्इ अचम्मीत बनाइदियो । महिनावारी भएको बेला छिमेकी श्रेष्ठले डरधम्की देखाउँदै जबर्जस्ती गरेको बालिकाले बताएकी थिइन् । यता बालिका गर्भवती भएको थाहा पाएपछि केटा पक्षको धम्कीका कारण घर छाडेर उनी धरान पुगेकी थिइन् । विभिन्न मिडियाले उक्त घटनालार्इ प्रकाशन गरेपछि बिचल्लीमा परेकी बालिकालाई सिबिन अन्तर्गत बालबालिकालार्इ सहयोग गर्ने संस्था हेल्पलाइनले जिम्मा लियो ।
त्यस्तै दोलाखामा आफ्नै ८० बर्षिय हजुरबुबाले नातिनिलाइ बलात्कार गरी गर्भवती बनाएको घटनाले मिडिया र सामाजिक सन्जालमा विशेष प्रथामिकता पायो । आफ्ना छोरा बुहारी नातिनिहरु घरमा छाडेर काठमाण्डौ गएको बेला निरन्तर हजुरबुबाले नातिनिलार्इ बलात्कार गर्दै आएको पुष्टि भएपछि प्रहरीले ८० वर्षीयय हजुरबुबालाइ पक्राउ समेत गर्‍यो ।
त्यस्तै घरबाट माइती घर सुनसरीको सदरमुकाम ईनरुवा जान्छु भनी हिँडेकी यमुनाको शव भारतको बिहारमा भेटियो । विहारस्थित ठाकुरगञ्ज जाने बस पार्क नजिकै चियाबगानमा उनको शव फेला परेपछि घटनासम्बन्धी अनुसन्धान भइरहेको बताउँदै प्रहरी घटनाको नजिक अझैसम्म पुग्न सकेन । उनलाई पनि बलात्कार गरी हत्या गरिएको हुन सक्ने आशङ्का गरिएको थियो ।
यसैगरी मोरङको केराबारी गाउँपालिका ८ आमजुङ्गे बस्ने ४० वर्षिया गीता खवास सोही ठाउँको धान खेतमा मृत भेटिइन । उनको पनि घटनाबारे प्रहरीले अनुसन्धान भैरहेको बताइरहेको छ ।
खोटाङको जन्तेढुंगा गाउँपालिका–६ दिप्लुङकी ३७ वर्षीया देवी विक पनि मृत अवस्थामा भेटिएकी थिइन। माइतीबाट घर फर्कने क्रममा सम्पर्कविहिन बिकको शव जन्तेढुंगा गाउँपालिका–३ काहुलेस्थित नेप्टे जंगलमा भेटिएको प्रहरीले जनाएको थियो । उनलाई सामुहिक बलात्कार गरी हत्या भएको हुन सक्ने अनुमान गरिए पनि घटनाको बास्तविकता पत्ता लगाउन प्रहरीको असक्षमतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भयो ।
त्यस्तै खोटाङ्गमै केही महिना अगाडी सामुहिक बलात्कारपछि हत्या भएको आशङ्का गरिएको रिता तामाङ्गको घटनामाथि अझै प्रहरी निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।
केही समय अगाडी मा बाँकेको कोहलपुरका अहमद अफतालले आफ्नी जेठी श्रीमतीलार्इ झारफुक गर्न जाउ भन्दै जङगलमा लगेर घाँटी रेटेर विभत्स हत्या गरे । २ श्रीमतीका कारण धेरै कचकच सुन्न परेको भन्दै जेठी श्रीमतीलार्इ हत्या गरेको उनले प्रहरी समक्ष स्विकार गरे । घाँटी रेटेर टाउँको झोलामा बोकी प्रहरी प्रशासनमा आत्मसमर्पण गर्न पुगेका अफतालले २ श्रीमतीका कारण ज्यादा तनाव भएको र जेठीलाइ मारिदिएको सजिलै स्विकार गरेका थिए ।
त्यस्तै रुकुमकी बयलसरा कामीलार्इ आफ्नै श्रीमानले खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरेको धेरै भएको छैन। रुकुमको पुथाउत्तरगङगा गाउँपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसबाट दलित महिला सद्स्य निर्बाचित बयानसराले आफू जनप्रतिनिधि बनेको हुनाले उनले ज्यान गुमाउनु पर्‍यो ।
उल्लेखित घटनाहरु त केही प्रतिनिधि मात्र हुन् । यसरी श्रृङखलावद्ध रुपमा महिलामाथि भएका घटनाहरुले हाम्रो समाज, सामाजिकता, संस्कृति र कानुनी राज्य कुन धरातलमा छ अनि न्यायिक अधिकार कसका लागि प्रयोग भैरहेको छ भन्ने विषय दिनहुँ अन्यौलपूर्ण बन्दै गएको छ ।
छोरा र छोरीको चरम विभेदले आमाको कोखबाट धर्ती टेकेको दिनदेखि छोरीको आत्मविस्वास र क्षमतालार्इ हत्या गरिदै आएको छ । एकातिर सामाजिक, साँस्कृतिक विभेदता अर्कोतिर राज्यको निरिहता विविध कुमेलहरुले महिलाहरुमाथि अत्याचार, शोषण, हिंसाले जन्मदेखि मृत्युपर्यन्त हरेक पल पछ्याइरहेको यथार्थ हाम्रै अगाडि छर्लङ्ग नै छ । यो विषयमा अब त गम्भीर भएर सोच्ने हो कि ?